Koox ka tirsan wasaaradda caafimaadka Puntland oo daaweyn u tagtay magaalada Buuhoodle | Puntland Ministry of Health
Koox ka tirsan wasaaradda caafimaadka Puntland oo daaweyn u tagtay magaalada Buuhoodle
Kooxdii ugu horreysey ee ka socota wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa gaartay magaalada Buuhoodle, kadib markiii dad ka toban qof ay cudurka shuban biyoodka ugu dhinteen.
Ilaa hadda inta la xaqiijiyay 13 ruux ayaa u dhimatay cudurka shuban biyoodka oo dhowaan deegaanka ka dilaacay,waxaa kaloo hadda xannuunka la jiifa dad ka badan soddon ruux, sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka deegaanka.
“Waxaan u tagnay Buuhoodle sidii daaweyn looga billaabi lahaa, waxaan ku dadaalleynaa in la xakameeyo cudurka.” ayuu yiri Khaalid Muuse oo ka tirsan kooxda caafimaadka ee ka socota wasaaradda caafimaadka Puntland.
Wuxuu inta ku daray inay tageen deegaannada miyiga, halkaas oo ay wacyi gelin ka billaaben si looga hortago inuu cudurku ku faafo bulshada oo dhan.
“Dadka waxaan u sheegaynaa in nafaadda lugu dadaallo, si looga hortago cudurku inuu fido.”ayuu yiri Khaalid.
Ugu dambeyntii, wasaaradda caafimaadka Puntland war ka soo baxay waxaa lugu beeniyay magaalada Buuhoodle inuu ka dilaacay cudurka daacunka, iyadoo looga digay hay’addaha caafimaadka inay baahiyaan been abuurka ku aadan cudurka ka jira magaalada Buuhoodle.